हजुरबा उमेरकाले नौ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरे अनि १० रुपैंयाँ दिएर घर पठाए
पर्वत । पर्वतमा नौ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएको घटना एक लाख रुपैयाँ दिएर मिलाउने प्रयास गरिएको छ । जघन्य अपराध गाउँमै मिलाउने तयारी भएको खुलेपछि मानवअधिकारकर्मीको प्रयासमा घटनाको एक सातापछि प्रहरीले आरोपीलाई पक्रेको छ ।...
‘सेक्स अफर’ गरेर नाङ्गो भिडियो निर्माण अनि अपहरण
झापा । युवतीको प्रयोग गरेर धनाढ्यहरूलाई जालमा पार्ने अनि अपहरण गरेर फिरौती उठाउने घटना विश्वभरि नै हुने गरेका छन् । जसलाई ‘हनी ट्रयापिङ’ भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि केही वर्षयता बेला–बेला युवतीले प्रेम ...
काठमाडौं । चर्चित टिभी प्रस्तोता एवम् सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई नेपालमै काम गरेर बस्नका लागि श्रम स्वीकृती चाहियो । त्यतिले नपुगेपछि उनले अमेरिकन नागरिकता र पासपोर्ट नै त्याग्नुप-यो । तर, ‘ए’ क्लासको ठेकेदार ...
काठमाडौं । सरकारी जमिन (ललितानिवास, बालुवाटार) घोटाला प्रकरणमा अन्ततः ठूलो नेताहरू पनि तानिएका छन्। तत्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, तत्कालिक मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालिक सचिवहरू दीप बस्...
फेरि लोकसेवाले विज्ञापन गर्ने
काठमाडौं । स्थानीय तहबाट माग भई आएअनुसार सरकारले करिब छ हजारको सङ्ख्यामा स्थानीय तहका लागि पुनः लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ । गत जेठमा आयोगले खोलेको विज्ञापनबाट दशैँअगावै कर्मचारी स्थानीय तहमा सेवा गर्न पुग्न...
पहिले भारतमा बेचिन्थे, अहिले खाडी र अफ्रिकी मुलुकमा बेचिन्छन् नेपाली चेली
काठमाडौँ। विगतमा नेपाली महिलाको बेचबिखन भारतका कोठीहरूमा यौन शोषणका लागि हुन्थ्यो । अहिले भने बेचबिखनको क्षेत्र र प्रयोजन फैलिँदै गएको छ । विश्वका विभिन्न देशमा विविध स्वरूपमा मानिसको बेचबिखन हुने गरेको छ । भ...
भ्रष्टाचारसहितका गम्भीर गल्ती गर्ने दुई सय ५६ प्रहरी बर्खास्त
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचारसहितका गम्भीर गल्ती गर्ने दुई सय ५६ प्रहरीले जागिर गुमाएका छन् । उनीहरूमध्ये दुई सय ४९ लाई सेवाबाट हटाइएको र सात जनालाई बर्खास्त गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । सेवाबाट हटाइए...
विज्ञापनमा झण्डा अवमूल्यन गर्न निषेध, विदेशमा छुट !
काठमाडौं । राष्ट्रगान, राष्ट्रिय झण्डा र विभूतिको अवमूल्यन हुने गरी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नपाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा स्वदेश उत्पादनलगायत राष्ट्रिय म...
मोडेल एलिना रायमाझीलाई प्रश्न : राम्रा केटा देख्दा मन कस्तो हुन्छ ?
२०५५ सालमा अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निकै मेहनत गर्दै अघि बढेकी रायमाझीले फिल्ममा समेत अभिनय गरेर सफलता हात पारिन् । उनी आइटम डान्समा पनि...
कतारमा नेपाली कामदारको नाममा जबर्जस्ति २ करोड रिण ! घर फर्कनै बन्देज
काठमाडौँ — बर्दियाका उमेश थारू स्वदेश फर्कन कतारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको खोज तथा अनुगमन विभाग (एसफडी) पुगेका थिए । उनी कार्यरत साइमा समूह कम्पनीले नेपाल पठाइदिन्छु भन्दै टारिरहेको थियो । कम्पनीले पठाउने छाँट नदेखा...
काठमाडौं स् सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने भएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बढी जग्गा छानबिन नभएसम्म रोक्का रहने र प्रमाणित भएपछि जफत गर्ने गरी ऐनमा आठौं संशोधन गर्न ला...
साम्राज्ञीः बालुवा र गाडीमा किस गरेको दृष्य, अझै पुगेन की ?
काठमाडौं । नायिका साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह लगातार चर्चामा आइरहेकी छिन् । उनले इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेका फोटोले फिल्मी बजार तातिरहेको छ । अघिल्लो साता साम्राज्ञीकै तस्बिर र समाचारले मिडिया रंगियो । उनले इन्डोनेसियाको बालीमा प्...
प्रधानमन्त्रीका आधा दर्जन विज्ञकाे काम के ?
काठमाडौं । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्विटर ह्यान्डलबाट बिहिबार बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई बधाई दिने क्रममा एकैपटक दुईवटा गल्ती भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डलमा मेन्सन गरिएको ट्विटर अकाउन्ट बेल...
निर्मला हत्याको एक वर्ष: ‘सरकार गम्भीर हुने हो भने तत्काल हत्यारा पत्ता लाग्छ।’
काठमाडौ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष पुगेको छ। घटनाका दोषी अझै पक्राउ परेका छैनन्। अनुसन्धानका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी टोली बने। कुनैले पनि अभियुक्त किटान गर्न सकेका छैनन्। प्रहरीले ...
काठमाडौं। नागरिकको गोपनीयताको हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको‘दूरसञ्चारसम्बन्धी...
गाउँपालिका कार्यालयमै वडा अध्यक्षको मदिरा पसल
बैतडी । बाँयातिर नेपाली झण्डा गाडिएको छ । भवनमाथि गाउँपालिकाको साईनबोर्ड छ । एउटा कोठामा स्थानीय सरकार र अर्कोमा मदिरा पसल बेजोडले चलेको छ भन्दा पत्याउन मुश्किल पर्छ । तर, सबैलाई चकित पार्ने यो यथार्थ बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपा...
खच्चडमा खाद्यान्न कि सुन ? ओडारमा सुन राखेको भेटियाे
गोरखा । उत्तरी गोरखा सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । खाद्यान्न ढुवानीको एक मात्र माध्यम खच्चड हो । स्थानीय व्यापारीसमेत रहेका धार्चे गाउँपालिका केरौँजाका धनकमल उत्तरी क्षेत्रका खच्चड व्यवसायी हुन् । उनी उत्तरी क्षेत्रका व्यापारीसँग सम्पर्क...
मोदी भदौमा नेपाल आउने, कमान्डो टोली नेपाल आएर फर्कियो
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी भदौ अन्तिमसाता चारदिने नेपाल भ्रमणमा आउने निश्चित भएपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी र बिदेश मन्त्रालयका कर्मचारी दुई महिनाअगावै त्यसको तयारीमा जुटेका छन् । उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार भद...
उन्नाइसौं शताब्दीमा आविष्कार भएको रेल र बीसौं शताब्दीको आविष्कार हवाईजहाजका भरमा चलिरहेको दुनियाँलाई एक्काइसौं शताब्दीले त्योभन्दा तीव्र गतिको केही दिनेवाला छ रु ‘जरुर १’ वैज्ञानिकहरू भन्दै छन्, ‘अबको केही वर्षमै ...
सरकारले साढे १६ करोड बाँड्यो
काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो वर्ष विभिन्न शीर्षकमा करिब साढे १६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा विभिन्न व्यक्तिको उपचार खर्च, आर्थिक सहायता र क्षतिपूर्तिको लागि १६ करोड ४४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको हो । मन्...